यो भ्रम नै भ्रमको देश हो : महेशराज पन्त::KhojOnline.com
नेपालका एक यस्ता पुराविद् हुन्, जो नेपाल अध्ययनका लागि सबैभन्दा विश्वसनीय स्रोतसंस्था हुन्। पिता नयराज पन्तले २००९ देखि सुरु गरेको संशोधन मण्डल पाठशालाका विद्यार्थी महेशराजले पाठशालाकै अध्ययनका आधारमा विद्यावारिधि गरे, जर्मनीको ह्यामबर्ग विश्वविद्यालयबाट। ६५ वर्षको उमेरसम्म त्यहीँ जागिरे भइरहन पाउने ‘हाइफाई’ अवसर बीचमै छोडेर ५९ वर्षको उमेरमा नेपाल आए। नेपाली, संस्कृत, अंग्रेजी र हिन्दीमा लेख्न–पढ्न सक्ने पन्त पढ्न चाहिँ यी भाषालगायत प्राकृत, नेवारी, जर्मन, फ्रेन्च, मराठी, बंगाली पनि सक्छन्। उनका दुई सयभन्दा बढी शोधलेख प्रकाशित छन्। जर्मनी र भारतबाट एकएक गरी नेपालबाट उनका छवटा पुस्तक प्रकाशित छन्। उनी इतिहासप्रधान त्रैमासिक पत्रिका ‘पूर्णिमा’को उठानदेखिका सम्पादक पनि हुन्, जसको १४४ औँ अंक प्रकाशोन्मुख छ। भूपी शेरचनले ‘यो हल्लैहल्लाको देश हो’ भनेझैं पन्त उही भाकामा भन्छन्, ‘यो भ्रम नै भ्रम लेख्ने, प्रचार गर्ने र त्यही पत्याउने देश हो।’ विद्यालय–विश्वविद्यालयको विकल्पका रूपमा पिता नयराजले चलाएको संशोधन मण्डल ‘विफल–अवरुद्ध’ भएको पीडाबीच महेशराज पन्त यही भदौ ४ गते ७३ वर्ष पूरा हुँदैछन्, तर उनीसँग ३७ वर्षे तन्नेरीसँगभन्दा बढी जोस छ, खोज्नुपर्ने–लेख्नुपर्ने थुप्रै योजनाको चाङ छ। उनै पन्तसँग नागरिकका लागि विमल आचार्यले साउन २७ र २८ गते गरेको अन्तर्वार्ता :
कमलप्रकाश मल्लले ‘संस्कृत पढेकाहरू शक्तिका सानुराग बफादार भएका छन्’ भनी लेखे। मैले उनलाई एक लेख लेखेर जवाफ दिइसकेको छु। म आफूले १४ वर्ष हुँदा एबीसीडी सिकेको हुँ। पछि मैले यसमा पनि राम्रो पकड जमाएँ। राम्रो स्कलर हुन सकेसम्म धेरै भाषाको ज्ञान हुनु जरुरी छ। तर, केही वर्षयता के देखिएको छ भने, संस्कृत पटक्कै नजान्नेहरू टुटेफुटेको अंग्रेजीकै भरमा विद्वान् कहलिएका छन्। गोरा–पश्चिमाहरूलाई खुसी पार्ने, उनीहरूले जे लेखे पनि पत्याइदिने, विदेशीले थुकेर फालिदिएको जुठोलाई भव्य स्वागत गर्ने प्रचलन बढेको छ, हामीकहाँ। मेरो अनुभवले के भन्छ भने नेपालमा अंगे्रेजीमा लेख्दा इज्जत बढ्दो रहेछ तर पाठक चाहिँ नेपालीमै लेख्दा बढ्दा रहेछन्।
‘नेपालका पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ शीर्षकको लेखमा यहाँले विदेशीको इसारामा नाच्नेलाई बौद्धिक भनिएको भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ। के यस्तै छन् सबै?
लाग्छ नि। म एक्लैले केसम्म गरूँ? हामीले आफ्नै बलबुतामा यस्तो तयार पारेपछि अरू कोही जुर्मुराउनुपर्‍यो नि। अँ, सजिलोका नाममा विनास्रोत, विनापादटिप्पणी लेख्नुहुन्न। अहिले खुब चर्चा छ नि एकजना ‘अगेन्स्ट द करेन्ट’ लेख्छन् भनेर, उनले जसरी सन्दर्भस्रोतसामग्री छिपाएर–लुकाएर लेख्नु बेइमानी र चोरी हो। चोरी चोरी नै हो, बौद्धिक चोरी भन्ने भए आर्थिक–भौतिक चोरी पनि भन्नुपर्छ। स्रोत नखोल्नु अशास्त्रीय काम हो। सबै आफैँले जानेजस्तो गरी लेख्नु पाठकलाई अपमान गर्नु हो।
सोम, साउन ३०, २०७४ मा प्रकाशित